Maamulka Spain oo shaqada ka ceyrin doona Julen Lopetegui – hal maalin ka hor bilaabasahda koobka aduunka.Maamulka Spain oo shaqada ka ceyrin doona Julen Lopetegui – hal maalin ka hor bilaabasahda koobka aduunka. - (HILLAAC.NET) THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS
Maamulka Spain oo shaqada ka ceyrin doona Julen Lopetegui – hal maalin ka hor bilaabasahda koobka aduunka.Maamulka Spain oo shaqada ka ceyrin doona Julen Lopetegui – hal maalin ka hor bilaabasahda koobka aduunka.
June 13, 2018 at 10:45 Maamulka Spain oo shaqada ka ceyrin doona Julen Lopetegui – hal maalin ka hor bilaabasahda koobka aduunka.Maamulka Spain oo shaqada ka ceyrin doona Julen Lopetegui – hal maalin ka hor bilaabasahda koobka aduunka.2018-06-13T10:45:24+00:00 CAYAARAHA
Spain ayaa lasoo warinayaa in maalin ka hor bilaabshada koobka aduubka ay shaqada ka ceyrin doonaan Julen Lopetegui.
Julen Lopetegui shalay waxaa uu aqbalay inuu macalinka cusub ee Real Madrid noqon doono kaasoo badalka Zidane oo 13-jeer champions league in ay ku guleystaan ka dambeeyay ka dib markii uu koobka aduunka uu dhamaado.
Si kastaba maamulka Spain iyo madaxweynaha csuub Luis Rubiales ayaa la fahansanyahay in ay qorsheenayaa xaalada Lopetegui, in ay soo gaba gabeeyaan kaasoo u duulay Moscow si uu hogaamiye ugu noqdo spain.
The Independent ayaa laga soo warinayaa in macalink la abdali doono iyadoona manta shir jaraaid u qaban doono saxaafadda kuna cadeyn doono booska Lopetegui.
53-sano jirkaan ayaa ilaa haatan laga adkaan tan iyo markii Euro 2016 uu soo idlaaday, La Roja ayaa ah kuwa ugu cad cad in ay hantaan tartank koobka aduunka ee lagu qabanayo Russia.
« Ciidamada dowladda oo 3 ruux u soo xiray qarax lagu aasay Buulo burde
EEG: Sawirro la helay oo Walaac wayn galiyay Masar kaddib Maxamed Saalax oo… »